Sergio Aguero oo kusoo laabtay Manchester City si loo hubiyo xaaladiisa caafimaad | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Sergio Aguero oo kusoo laabtay Manchester City si loo hubiyo xaaladiisa caafimaad
(15-11-2017) Weeraryahanka kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa waxaa ka go’an inuu dhaqaatiirta ka war sugo waxaana uu dib ugu soo laabtay kooxdiisa ka dib markii uu ku dhaawcmay kulankii Argentina ay la ciyaareen Nigeria.
29 jirkaan ayaa dhawaan noqday gooldhaliyihii ugu fiicnaa ee Citizens xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu ku xanuunsaday qolka labiska intii lagu jiray qeybtii hore ee kulankii Albabeleste ee 4-2 looga adkaaday Krasnador Talaadadii.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinno hore, Aguero ma lumin miyirkiisa laakiin waxaa uu dareemay xanuun dhabarka ah waxaana loo qaaday isbitaalka u dhaw “baaritaannada joogtada ah sida taxaddar”, taasoo soo celisay wanaag.
City ayaa soo saartay war saxaafadeed ay soo saartay xiddigii hore ee Atletico Madrid habeenkii talaadada, taasoo muujineysa in la siiyay cadeymo muujinaya inuu dib ugu laaban doono Manchester Isbuucyada soo aadan.
“Sergio Aguero ayaa la cadeeyay dhaqaatiirta inay ku laabtaan Manchester sida loo qorsheeyay,” ayaa lagu yiri bayaanka. “Sergio ayaan marnaba ma lumin miyir, waxaana loo qaaday isbitaal si loo baaro baaritaan caafimaad, wuxuu qiimeyn doonaa kooxda caafimaadka ee kooxda ka hor kulanka isbuucaan ee Premier League ay ku wajaheyso Leicester City.”
Aguero ayaa muddo yar ku qaatay qandaraaskii bishii hore ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray shil gaari intii lagu jiray safar uu ku yimid Amsterdam.